Nge-Okthobha i-30 Zodiac-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope - Imiqondiso Yeenkwenkwezi
Eyona Imiqondiso Yeenkwenkwezi Nge-Okthobha i-30 Zodiac yi-Scorpio-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope
Nge-Okthobha i-30 Zodiac yi-Scorpio-Ubuntu obupheleleyo beHoroscope
Umqondiso we-zodiac ka-Okthobha u-30 yi-Scorpio.
Uphawu lweenkwenkwezi: Scorpion . Olu phawu lubonisa uthando kunye nokufihla imeko yaba bantu. Luphawu kubantu abazelwe phakathi kuka-Okthobha 23 no-Novemba 21 phantsi komqondiso weScorpio zodiac.
Inkqubo ye- Ikhwezi leScorpio ngeenkwenkwezi eziqaqambe kakhulu ukuba yiAntares zisasazeke kwiidigri ezingama-497 zecala phakathi kweLibra eseNtshona kunye neSagittarius eseMpuma. Ububanzi bayo obubonakalayo ngama-40 ° ukuya -90 °, le yenye yeenkwenkwezi ezilishumi elinambini zodiacac.
IScorpion ibizwa ngegama elivela kwisiLatin iScorpio, uphawu lwe-zodiac lwango-Okthobha u-30.
Uphawu olwahlukileyo: Taurus. Olu luphawu ngqo ngqo kwisangqa se-zodiac ukusuka kumqondiso weScorpio zodiac. Iphakamisa ukugcinwa kwemfihlo kunye nokusebenza kwaye ezi zimbini zithathwa njengezenza ubuhlakani obukhulu.
Ukuziphatha: Kulungisiwe. Le modali iphakamisa ubume behlombe labo bazalwa nge-30 ka-Okthobha kunye nokuthula kunye nokuziva benothando ngokubhekisele kuninzi lwezinto zobomi.
Indlu elawulayo: Indlu yesibhozo . Le ndlu ilawula izinto eziphathekayo zabanye, ijolise kumzabalazo osisigxina womntu wokuba nayo yonke into enabanye abantu. Oku kukwabhekisa kwimfihlakalo kwaye okungaziwayo kukufa.
Umzimba olawulayo: UPluto . Le planethi kuthiwa ilawula ukuzinikezela kunye nemveliso kwaye ikwabonisa ukungabi namonde kwilifa. UPluto uhambelana neHadesi, uthixo wezinto ezingabonakaliyo kwiintsomi zamaGrike.
Isiqalelo: Amanzi . Le yinto yeemvakalelo notshintsho kunye nemithetho kubantu abazalwe nge-30 ka-Okthobha. Amanzi njengesixhobo adityaniswa nezinye ezintathu ukwenza izinto zibile ngomlilo, umphunga ebusweni bomoya kunye nokuma komhlaba.
Usuku lwethamsanqa: uLwesibini . Le veki ilawulwa yiMars efuzisela ukubonwa kunye nokubona kude. Ibonakalisa indalo enomdla yabantu beScorpio kunye nokuhamba ngokukhalipha kolu suku.
Amanani anethamsanqa: 3, 8, 12, 14, 21.
Ulwazi oluthe kratya ngo-Okthobha i-30 Zodiac ngezantsi ▼
Inyanga yeCapricorn Sun Sagittarius: Ubuntu obuqhutywa
Uphawu lweZodiac ngoMatshi 17 wokuzalwa
Ukuhambelana kobuhlobo begemini kunye negemini
luyintoni uphawu lwakho lwe-zodiac lwangoSeptemba 8
I-scorpio eyindoda kunye ne-aquarius yowasetyhini
capricorn indoda eneempawu zothando